आज मिति २०७७ फाल्गुन २१ गते शुक्रबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
[ January 28, 2022 ] टिकटकमा भाइरल सेलरोटी पकाउने युवाहरू,यस्तो रहेछ सेलरोटी नै पकाउनुको कारण (भिडियो हे’र्नुहोस) समाचार
[ January 28, 2022 ] माघ १४ गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल राशिफल
[ January 20, 2022 ] घाँ टिमा च क्कु छि’राउने जादुगर भेटि,जीउँदै मान्छेको घा टिँमा च क्कु(भिडियो हेर्नु’स) समाचार
[ January 17, 2022 ] माघ ३ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल राशिफल
[ January 16, 2022 ] माघ २ गते देखी माघ ८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नु’होस समाचार
Homeराशिफलआज मिति २०७७ फाल्गुन २१ गते शुक्रबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
March 5, 2021 admin राशिफल 3024
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)
अरुको कुरामा बिशे’ष ध्यान नदिनु होला । मनमा कुबिचारले बास गर्नाले भोलिको समयमा केहि झ’न्झज पर्न सक्छ । खर्चको योग रहेको हुनाले लगा’निमा ध्यान दिनु होला । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । खानपानका कारण स्वा’स्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।
ब्यापार ब्यव’सायको निम्ति राम्रो समय रहेको छ । निर्णय गर्ने क्षामतामा बृद्यि हुनेछ । मित्रज’नहरु बाट साथ सहयोग प्राप्त हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामान्य यात्रा रहन सक्छ । पारीवारिक मनोर’ञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कार्य धैर्यताका कार’ण पद प्रतिष्ठामा बृद्धिको योग रहेको छ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह)
अरुको छीटो बि’श्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ । अरुको सहयोग निम्ति धेरै समय ब्यति’त हुन सक्छ । कुरा काट्रने ब्यक्ति हरुको बृद्यि हुनेछ । शत्रु सबल रहलान । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । नयाँ लगानि तथा साजेदारी’कार्यका क्षेत्रमा भने उत्तम समय रहनेछ ।
मनो’रञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । सामान्य आम्दानि हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्र जन को साथ सह’योग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला ।मन प्रशन्न गराउने समाचार प्राप्त रहनेछन । अध्यन अध्यापनका सन्द’र्भमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।
भौतिक श्रोत सा’धनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाई’दा हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम परीश्रमको कदर नहुनाले मनमा सामान्य चिन्ता हुनेछ । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक परी’श्रको सम्भाबना रहेको छ ।
खा’नपान मा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कामको क्षेत्रमा भने साधारण झन्झट तथा अप्ज’स सहनु पर्ला । दाजु भाई बिचको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ । आय आम्दानि मा बृद्यिहुने योग रहेको छ । सामान्य यात्रा पस्चात मान सम्मा’नको प्राप्ती हुन सक्नेछ ।
मान प्रति’ष्ठामा बृद्यि हुने योग रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । खान’पानमा बिशेष रुचि रहने छ । मधुर बाणीका कारण बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा भने समय मध्य’म रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।
मान्यजनको भेट’घाट बाट मन प्रशन्न रहला । मित्रजन तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार रहने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहन सक्छ । कार्य क्षेत्रमा सा’मान्य झन्झट ब्यहोनु पर्ला । आँट र शाहासको बृद्यि हुनेछ । ब्यापार ब्यवसाय मा भने सामान्य ढिलाईको सम्भा’बना रहेको छ ।
बिश्वासिलो ब्यक्ति बाट धोका’हुनाले गरिरहेको काममा बिशेष झमेला पर्न सक्छ । कु’राकाट्ने ब्यँितहरु को कारण सामान्य चिन्ता बढ्न सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भा’बना रहन सक्छ । आय आर्जनका लागी भने समय उत्तम रहेको छ । साझेदारी कार्यको क्षेत्रमा अघि नब’ढेको नै राम्रो हुनेछ ।
मित्रजनहरु बाट साथ सह’योग प्राप्त हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले गर्दा मन प्रशन्न रहला । यात्रा फाईदा मुलक हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । सामान्य स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले स’ताउन सक्छ । गैर ब्यक्तिको पुर्ण बिस्वा’स नर्गनु राम्रो हुनेछ । कुराकाट्ने ब्यतिहरुबाट बच्नु पर्ने छ ।
कार्यस’म्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । परीबारका कोहि सदस्य हरुको स्वास्थ क्षेत्रमा झमे’ला पर्न सक्छ । बौधिक बिकास तथा विद्या प्राप्ति योग रहेको । कार्यक्षेत्रको लगन सिलतामा बृद्धि हुनाले मान सम्मानको योग रहेको छ । समय मध्य’म रहनेछ ।
मनोरञ्ज’नको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । श्रम परीश्रमको राम्रो कदर हुने समय रहेको छ । सबारी साधन को प्रयो’गमा ध्यान दिनु होला सामान्य झन्झट रहन सक्छ । शुभचिन्तकहरुको साथ प्राप्त हुनाले कार्य सहज बन्नेछ । सामान्य का’र्य सम्पादनमा अधिक परीश्र गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।
एउटी युवतीलाई दुई जना युवकले नै मेरो श्रीमती हो भन्दै एकसाथ मिडियामा आए, दुईं जनाले नै खोले यथार्थ (हे’र्नुहोस् भिडियो)
आज पनि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?
६ वर्षिय जियाको सबैलाई चकित पार्ने यस्तो प्रतिभा [हेर्नुहोस भिडियो सहित]
August 29, 2020 admin राशिफल, समाचार 17334
कपिल’बस्तु को गोरुशिंगे’मा एक ६ बर्ष’कि सानी नानी जिया भुसाल मा एक अनौठो प्रतिभा रहेको छ। ६ बर्षको सानै उमे’र मा बाबु गुमाएकी जिया भुसाल मा धेरै किसिमका प्रतिभा रहेका छन। धेरै सपना बोकी बिश्वमा
आज मिति २०७८ साल जेष्ठ २ गते आईतबारको राशिफल हे’र्नुहोस्
May 16, 2021 admin राशिफल 3255
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) महत्वपूर्णकार्य सम्पा’दन गर्न पारीवारिक साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । कार्यक्षे’त्रमा लगाईएको लगन सिलताको कदर हुनेछ
आज मिति २०७८ साल जेष्ठ ९ गते आइतबारको राशिफल हेर्नु’होस्
May 22, 2021 admin राशिफल 3561
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ ) अनावश्यक खर्चको सम्भा’बना रहेकोछ । कार्यसम्पा’दनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नाले दिन निरा’सा पुर्ण ब्यतित रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछन ।
टिकटकमा भाइरल सेलरोटी पकाउने युवाहरू,यस्तो रहेछ सेलरोटी नै पकाउनुको कारण (भिडियो हे’र्नुहोस)
माघ १४ गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
घाँ टिमा च क्कु छि’राउने जादुगर भेटि,जीउँदै मान्छेको घा टिँमा च क्कु(भिडियो हेर्नु’स)
माघ ३ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
माघ २ गते देखी माघ ८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल हेर्नु’होस
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227928)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220874)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220725)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217744)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (216801)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215445)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (214197)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (214087)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (195700)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182561)